Ibsaa Jireenyaa - Page 37 of 59 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
December 18, 2018 Sammubani One comment
Muharramaat-(Dubartoota Fuudhun Haraama ta’an)-kutaa-1
Akkuma kutaa darbee keessatti jenne gaa’illi funyoo cimaa dhiiraa fi dubartii walitti hidhuudha. Garuu funyoon gaa’ilaa kuni dubartii fi dhiira hunda walitti hin hidhu. Kana jechuun dubartoonni hundi dhiira hundaaf niiti hin ta’an. Dubartoota keessaa dhiira irratti fuudhun haraama (dhoowwaa) kan ta’antu jiru. Tarii ummanni Oromoo harki caalu gosaan waan wal fuudhaniif dubartoonni isaan fuudhan haraama ta’uu irraa fagaachu danda’u. Oromoo Arsii biratti gosa tokko keessatti namoonni wal hin fuudhan. Fakkeenyaf, gosti Garjeeda jedhamtu keessatti dhiirri Garjeeda ta’ee fi dubartiin Garjeeda taatee wal hin fuudhan.